Yan Aung: Peekaboo Navigation Bar လုပ်ခြင်း
ကိုယ်က Banner လှလှလေး တင်ထားပါရဲ့နဲ့ အဲဒီ့ Bar ကြီးက ပေါ်နေတော့ ဘာနဲ့သွားတူလဲသိလား
သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းထဲက အချစ်တွေကို မြင်ချင်ပါရက်နဲ့ သူမက မျက်မှန်တပ်ထားသလို ဖြစ်နေတယ်.
ဆိုလိုတာက မချင့်မရဲ ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ.
ဆိုတာလေးကို template ထဲက <body> Tag မတိုင်ခင်မှာ ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.
<Variable name = …..> blah blah blah..
အားပါး. ကိုရန်အောင်ကြီး တော်လှချည်လားလို့ မပြောနဲ့ဦး. အဲဒါ ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး. ဒီနေရာကနေ ယူထားတာ. အဲဒီ့လူကြီးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း သွားပြောဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်..